သတင်း – Page2– Shwemyanmar
#ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အတွက်_OIC_ကဒေါ်လာ_၇_သန်းထောက်ပံ့ခဲ့ ———————————————– ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၄ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဟောင်း ဒေါက်တာကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်အတွက် အစ္စလမ်မစ် နိုင်ငံများအဖွဲ့ချုပ်( OIC) က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ သန်း ထောက်ပံ့ ခဲ့ကြောင်း ယင်းကော်မရှင်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အမည်မဖော်လိုသူ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပြောသည်။ “ကိုဖီအာနန်လစာကတော့အများဆုံးပေါ့။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လစာတွေ၊ တခြားအသုံးစရိတ်တွေအတွက် ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်မှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) က တဆင့် OIC ပေးခဲ့တာပါ” ဟု ၄င်းကပြောဆိုသည်။ ယင်းကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်ကာလကတည်းက အကူအညီပေးရန် NLD အစိုးရကို OIC က ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရကလက်မခံသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) မှ တဆင့်အကူအညီပေးခဲ့သည့်ကိစ္စအား […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on #ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အတွက်_OIC_ကဒေါ်လာ_၇_သန်းထောက်ပံ့ခဲ့
____________________________ “KIA သူပုန်​အဖွဲ့မှ ​မော်​​တော်​ယာဉ်​ ၉ စီးအား မီးရှို့ဖျတ်​ဆီး”
KIA က​ခွေးထက်​ဆိုး​နေပီ….ဒီတစ်​ခါဆိုအပြတ်​ဖြုတ်​သင့်​ပီ ____________________________ “KIA သူပုန်​အဖွဲ့မှ ​မော်​​တော်​ယာဉ်​ ၉ စီးအား မီးရှို့ဖျတ်​ဆီး” ================================= ၂၀၁၇၊ ဒီဇင်​ဘာ ၁၄ ရက်​၊ ၁၆၁၅ ချိန်​ခန့်​တွင်​ ဖားကန်​မြို့နယ်​၊ လဝါး​ကျေးရွာအုပ်​စု၊ ခွန်​ဆိုင်​ယန်​​ကျေးရွာအနီး လီဒိုလမ်းမကြီး ​ပေါ်တွင်​ တနိုင်းမှ မြစ်​ကြီးနားသို့ ဆင်းလာ​သော ​မြေသယ်​ယာဉ်​ များအား KIA အကြမ်းဖက်​သူပုန်​အဖွဲ့မှ မီးရှို့ဖျတ်​ဆီးခဲ့​ကြောင်း သတင်း ​ရရှိပါသည်​။ ဖြစ်စဉ်​​အား စိစစ်​ရာ KIA အကြမ်းဖက်​သူပုန်​အဖွဲ့သည်​ ​တနိုင်း မှ မြစ်​ကြီးနားသို့ ဆင်းလာ​သော မြေသယ်​ယာဉ်​ ၁၁ စီးအနက်​ ၉ စီးအား မီးရှို့ဖျတ်​ဆီးခဲ့ပြီး ကျန်​ ၂ စီးနှင့်​ ယာဉ်​​မောင်းများအားလုံး ဖမ်းဆီး ​ခေါ်​ဆောင်​သွား​ကြောင်း သိရပါသည်​။ – – – […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ____________________________ “KIA သူပုန်​အဖွဲ့မှ ​မော်​​တော်​ယာဉ်​ ၉ စီးအား မီးရှို့ဖျတ်​ဆီး”
တပ်မတော်ကတော့ပြောပြီ …………. တပ်မတော်ကတော့အစပျိုးပြလိုက်ပြီ။ ငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာ ကြည့်ကပါ။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှခိုးဝင်လာသော ဘဂါင်္လီမွတ်စလင်ကုလားများ အားအစိုးရမှပြန်လည်လက်ခံ မှုနှင့်ပါတ်သက်၍တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ရုံးမှ အောက်ပါအတိုင်းသဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့…. ***လူအခွင့်အရေးလူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုစသည်တို့ အားအကြောင်းပြ၍နောက်ကွယ်မှ ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာဖြင့်ပြုမှုလုပ် ဆောင်လာမှု့များသည်နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနှင့်အမျိူးသားအကျိူး စီးပွားကိုထိခိုက်လာသည့်အပေါ် တွင်အထူးသတိထားစောင့်ကြည့် ကာကွယ်သွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ် ပါကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန် အပ်ပါသည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ရုံး
Posted inသတင်းLeaveaComment on တပ်မတော်ကတော့ ပြောပြီ
ရှေ့ဆက်တိုးလိုက်တဲ့သမီး ================= ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ 14/12/2017 ညပိုင်း ၁၀ နာရီလောက်မှာ သတို့သမီးလောင်းရဲ့ အဖေ ၉၆ပါးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယ်။ နောက်15/12/2017နေ့မနက် သမီးက မင်္ဂလာဆောင်တယ်/ဝမ်းနဲစွာပေါ့။တဖက်ကလည်း ဖအေ့နာရေး။တဖက်ကလည်း တသက်မှ တမင်္ဂလာ။ အဲ့သူတို့အမျိုးတွေရဲ့ ဝိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့ အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင် အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်။ သြော် လောကလောက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေလည်း ခုဖြစ်နေပါလားပေါ့။ဓမ္မအသိလေးရလိုက်ပါတယ် ။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿ ကာ။ Nyo Chaw Credit
Posted inသတင်းLeaveaComment on ရှေ့ဆက်တိုးလိုက်တဲ့သမီး =
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသို့ တက်ရောက် ဖူးမြော်ခွင့် ယာယီပိတ်မည်
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသို့ တက်ရောက် ဖူးမြော်ခွင့် ယာယီပိတ်မည် Posted: December 15, 2017 ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံခြားသားများ တက်ရောက်မှု ယာယီပိတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက ညွန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာတော် အပါး ၁၈၀၀၀ တို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘိသေက အနေကဇာတင် အခမ်းအနားနှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ အခမ်းအနား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အခမ်းအနားရက် မတိုင်မီ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်မှ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီအထိ ရွှေတိဂုံစေတီပေါ်သို့ လာရောက်မည့် […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသို့ တက်ရောက် ဖူးမြော်ခွင့် ယာယီပိတ်မည်
မောင်တောမြို့နယ်၌ နေရပ်စွန့်ခွာ ဘင်္ဂလီ ၆၀၀ ကျော်ရောက်ရှိ
မောင်တောမြို့နယ်၌ နေရပ်စွန့်ခွာ ဘင်္ဂလီ ၆၀၀ကျော်ရောက်ရှိ ================== ================== မောင်တောမြို့နယ်၊ ပညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာနှင့် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကြား ခန့်မှန်း(DT-368935)၌ နေရပ်စွန့်ခွာဘင်္ဂလီ ၆၈၇ ဦး(ကျား ၃၁၇၊ မ ၃၇၀) ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်က ထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါဘင်္ဂလီများမှာ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဖုံညိုလိပ်ကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ၂၅၅ ဦး(ကျား ၁၁၅၊ မ ၁၄၀)၊ ဆေးအိုးကျကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ၆၉ ဦး(ကျား ၃၄၊မ ၃၅)၊ သေကံခွ ဆုံကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ၁၃၈ ဦး (ကျား ၅၉၊ မ ၇၉)၊ ဖရုံချောင်းကျေး ရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ၁၇၄ ဦး(ကျား ၈၅၊မ ၈၉)၊ စိမ်းညှင်းပြာ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on မောင်တောမြို့နယ်၌ နေရပ်စွန့်ခွာ ဘင်္ဂလီ ၆၀၀ ကျော်ရောက်ရှိ
လေတပ်ကို ခေတ်မီလေတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဟု တပ်ချုပ် ပြော
လေတပ်ကို ခေတ်မီလေတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဟု တပ်ချုပ် ပြော ================== ================== သာလွန်သည့် လေကြောင်းစွမ်းအား ဖြစ်လာစေရေးအတွက် မိမိတို့ တပ်မတော်၏ လေတပ်ကို ခေတ်မီလေတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားလိုက်သည်။ “လေကြောင်းစွမ်းအားသာလွန်မှုကို အသုံးပြုပြီး စစ်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ပြိုင်ဘက်အပေါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်သည့် မိမိတို့၏ တပ်များတိုက်စွမ်းရည် ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် လေကြောင်း စစ်ဆင်ရေးကို အဓိကထား အသုံးပြုလာသည်ကိုတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်သာလွန်သည့် လေကြောင်းစွမ်းအား ဖြစ်လာစေရေးအတွက် မိမိတို့တပ်မတော်၏လေတပ်ကို ခေတ်မီလေတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မိတ္ထီလာတပ်နယ်ရှိ လေကြောင်းအတတ်သင် လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် တပ်မတော်(လေ)နှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့် လေယာဉ်များ တပ်တော်ဝင် […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on လေတပ်ကို ခေတ်မီလေတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဟု တပ်ချုပ် ပြော
ထိုင်းရဲ အလိုရှိနေသည့် တရားခံ မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေး အထူးတပ်ဖွဲ့ဥက္ကဌ လက်ထဲတွင် ပျောက်သွား Media(6) ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဘီလီယံနှင့်ချီပြီး ပိုက်ဆံလိမ်လည်ခဲ့သူ တရားခံ ဦးကျော်မြင့်ဦးအား မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေး အထူးတပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ဗညားသိုက်အောင်ဦးစီး၍ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော်လည်း ၄င်းတို့အဖွဲ့၏ဥက္ကဌလက်ထဲသို့ အပ်ထားရာ၌ အဆိုပါတရားခံမှာ ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်နေကြောင်း မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူအချို့က လူထုပုံရိပ်သို့ပြောသည်။ “ကျွန်တော်တို့သံဖြူဇရပ်မြို့မှာ အဲဒိတရားခံရောက်နေတယ်ကြားလို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ လိုက်စုံစမ်းပြီးတော့ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ဖမ်းဆီးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌလက်ထဲကို သွားအပ်ထားတယ်။နောက် ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်နေတော့ အဲဒိတရားခံဘယ်မှာလဲ ဥက္ကဌကို မေးကြည့်တော့ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေတယ်။ရေရေရာရာ တိတိကျကျ မပြောဘူး”ဟု မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးနိုင်ဗညားသိုက်အောင်ကပြောသည်။ အဆိုပါ တရားခံကို ဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက်ပိုင်း မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့မှ ဥက္ကဌ ဦးနိုင်ရွှေအောင် […]